CIN Khabar दुई अध्यक्षको टकराब, राष्ट्रपति विवादमा तानिँदै
दुई अध्यक्षको टकराब, राष्ट्रपति विवादमा तानिँदै नेकपा विवाद मत्थर पार्न आज अन्तिम प्रयास गरिने, प्रचण्ड बालुवाटार जाँदै
सीआईएन आईतबार, असार २१, २०७७, ०८:०७:००
मन्त्री पद्मा अर्याल र नेता हरिबोल गजुरेल ।
नेकपा भित्रको शक्तिसङ्घर्षले पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक शक्ति प्रयोग गर्ने स्पष्ट सन्देश दिनु भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेटेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो (शनिबार) साँझ ७ देखि सवा ८ बजेसम्म मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गर्नुभयो । मन्त्रीहरूलाई ‘मलाई साथ दिने कि नदिने ? मेरो नेतृत्वमा विश्वास छैन भने कित्ता रोजेर जान सक्नुहुनेछ ’ भन्दै निर्देशन र चेतावनी दिएपछि यसले नयाँ सङ्केत गरेको छ । मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले के के भन्नुभयो ? भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवाबरण मन्त्री पद्मा अर्यालसँग सीआईएनले गरेको कुराकानीः
अकस्मात बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले तपाईहरूसँग के भन्नुभयो ?
‘पार्टीमा केही असमझ्दारी देखिएका छन् । अब अन्तिमसम्म पार्टी एकताका लागि पहल गर्नु पर्छ । आन्दोलनको रक्षा गर्नुपर्छ । तपाईँ मन्त्रीहरू पनि यो या त्यो गुटमा लाग्ने, प्रकट हुनेभन्दा पनि पार्टी एकताको पक्षमा लाग्नूस्, उभिनूस, पहल गर्नुस् । ’ भन्ने नै हो उहाँको निर्देशनको आशय ।
कस्ता असमझदारि देखिएका रहेछन् पार्टी भित्र ?
समस्या भयो । पार्टीभित्र तपाईँहरू पार्टी एकताको पक्षमा नेताहरूलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने पक्षमा लाग्नूस् भन्नुभयो । गुटबन्दीलाई प्रोत्साहित नगर्ने गरी प्रस्तुत हुनूस् भन्नुभयो ।
म अन्तिमसम्म पार्टी एकताकै निम्ति, आन्दोलनकै रक्षाको निम्ति लाग्छु भन्नुभयो । तपाईँहरूले पनि त्यही हिसाबले पहल गर्नुस भन्ने हो उहाँको ।
तपाईँहरूसँग भेट्नुभन्दा अघि नै शितल निवासबाट प्रधानमन्त्री फर्किनु भएको थियो । त्यस बारेमा पनि केही जानकारी दिनुभयो ?
त्यस्तो केही भन्नु भएन । अहिले ठ्याक्कै धेरै छलफल पनि होइन । ‘मैलै अब मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई केही जानकारी गराउँ, केही अनुरोध गरौँ भनेर बोलाको हो । तपाईँहरू पार्टी एकता गराउने कुरामा भूमिका खेल्नूस्’ भन्नुभयो ।
राष्ट्रपति र आफ्नो बारेमा महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको भनेर प्रधानमन्त्रीले ‘मैले आवश्यक निर्णय र कदम चाल्नु पर्छ ।’ भन्नुभो हैन ?
वास्तवमा के भाछ भने नि अलिकति पार्टीभित्र समस्या देखिइसकेपछि स्वभावैले विभिन्न तत्वहरूले खेल्ने काम भैरहन्छ । त्यसैले दुवै तर्फ कैले के कैले के भ्रमहरू सिर्जना गर्ने अविश्वास खडा गर्ने काममा पनि एउटा तत्व सक्रिय नै छ ।
कतिपय घटनाक्रमहरू नमिलिसकेको सन्र्दभमा केहीकेही सत्यतामा आधारित भएर पनि अगाडि बढ्छन् । हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विशुद्ध रूपमा मन्त्री परिषद्का सदस्यहरूलाई पार्टी एकताकै पक्षमा उभिन आफ्नो पहलकदमी लिनको निम्ती नै आह्वान गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपतिको विरुद्धमा महाअभियोग ल्याउने तयारी भइरहेको छ भन्ने बारेमा सूचना आएको बताउनुभयो हैन तपाईहरूसँग उहाँले ?
यस्तो हल्ला पनि सुनियो भनेर भन्नुभा छ । ती साँचो कुरा के हो भन्ने कुरा अनुसन्धान भैराछन् । अब अहिले ठ्याक्कै प्रमाणित रूपमा यही हो भन्ने नहुँदासम्म केही बोल्ने कुरा पनि भएन ।
राष्ट्रियताका पक्षमा उभिँदा आक्रमण भयो भनेर सार्वजनिक रुपमा अघि आउनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विवादमा राष्ट्रपतिलाई जोड्नु भएको छ । नक्सा जारी गरेको कारण भारतले हटाउन खोजेको भन्दै उहाँले भनेको केही दिनमा पार्टीको विवाद झन उत्कर्षमा पुगेपछि राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउन खोजिएको भन्नु भएको छ ।
उहाँले भनुुभएको छ ‘मलाई दुवै पदबाट हटाउने मात्र होइन, राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यसैले म आत्मसमर्पण गर्दिनँ ।’ के त्यस्तै तयारी हो ? सीआइएनको प्रश्नमा प्रचण्ड नजिक मानिने स्थायी कमिटि सदस्य हरिबोल जगुरेल भन्नुहुन्छः
त्यस्तो त मलाई थाहा छैन । हैन माहाअभियोग कल्लाई, कललाई माहाअभियोग ?
राष्ट्पतिको विरुद्धमा ?
होइन । त्यो होइन, पक्का होइन । अध्यक्ष प्रचण्डको प्रष्ट धारणा के हो भने विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिलाई हटाउने उहाँको कुनै मनशय छैन । त्यो योजना पनि भएको छैन । छलफल पनि भएको छैन ।
पार्टी एकताका लागि भइरहेको पछिल्लो प्रयासको प्रगति के छ ?
उतारचढाव मै छ । हिजो अब मन्त्रीहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले के विषय राख्नु भो । त्यसले के हो, के हो भन्ने पारेको छ । दुईटा अध्यक्षबीच छलफल चलिरहेको छ ।
त्यो हिसावले हेर्दा केही एकता कायम रहन्छ भन्ने देखिन्छ । फेरि कैयौँ चिजहरूले आशङ्का पनि पैदा गरेका छन् । एकताको पक्षमा सबै जनता, कार्यकर्ता, नेता सबै भएको हुनाले फुट हुदैन भन्ने मलाई विश्वास छ ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असार २१, २०७७, ०८:०७:००